एकलविन्दु सेवा केन्द्रमा बढ्दै आकर्षण : साढे ७ अर्बका ३५ उद्योग दर्ता | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर एकलविन्दु सेवा केन्द्रमा बढ्दै आकर्षण : साढे ७ अर्बका ३५ उद्योग दर्ता
एकलविन्दु सेवा केन्द्रमा बढ्दै आकर्षण : साढे ७ अर्बका ३५ उद्योग दर्ता
काठमाडौं (अस) । उद्योगमन्त्री मातृका यादवले गत जेठ १ मा थालनी गरेको एकलविन्दु सेवा केन्द्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । उद्योग विभागका अनुसार एकलविन्दु सेवा केन्द्र मार्फत मंगलवारसम्ममा रू. ७ अर्ब ७१ करोड लागतका ३५ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को जेठमा ३६ ओटा उद्योग दर्ता भएका थिए भने रू. ३० करोडको मात्रै लगानी आएको थियो । यस वर्ष भने सोही महीनामा ३५ ओटा उद्योगमा रू. ७ अर्ब ७१ करोड लगानी आएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको साउनदेखि जेठ २८ सम्ममा रू. २६ अर्ब लागतका कुल ४१२ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।
केन्द्रमा काम शुरू भएयता सबैभन्दा बढी ऊर्जामूलक क्षेत्रका १३ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा रू. ७ अर्ब लगानी अनुमानित छ । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रू. ९ करोड लागतका ६ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा रू. ८ करोड ८७ लाख लगानीका सातओटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।
केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले सबै प्रयास गरेको विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएकाले उद्योग दर्तामा सोचेअनुसार प्रगति हुन नसके पनि आगामी दिनमा यसको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा छ । कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अभावलाई व्यवस्थापन गरिसकिएको उनले बताए ।
महानिर्देशक सिंहका अनुसार उद्योग दर्ता, अनुमति, भिसा सिफारिश, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायत काम एकल विन्दु केन्द्रअन्तर्गतका १४ ओटा निकायका अलग अलग फाँटबाट भइरहेको छ । केन्द्रमा ४० कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले केन्द्रबाट ९० प्रतिशत सेवा उपलब्ध भइरहेको सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार केही निकायले केन्द्रबाट सेवा दिनका निम्ति अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेका छैनन् । ‘अध्यागमन र राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुने केही सेवा दिन सकिएको छैन । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ती निकायलाई ताकेता गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक सिंहले भने ।